Cabdi Iley oo Xabaalo Qod iyo Meyd Tira koob ka dhamaan la, – Xeernews24
Cabdi Iley oo Xabaalo Qod iyo Meyd Tira koob ka dhamaan la,
16. September 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Hogaamiyaha iyo Horjoogaha ismaamulka DDSI Cabdi maxamuud Cumar (Cabdi Iley), ayaa ka hadlay Soomaali farabadan oo ciidamada ismaamulka ay kasoo badbaadiyeen gacanta Qowmiyada Oromada dalka Ethiopia.
Hogaamiyaha ismaamulka ayaa sheegay in ciidamada maamulka ee loo yaqaan Liyu Booliska ay soo badbaadiyeen dad soomaalia ah oo gaadhaaya ilaa 300 ruux oo Soomaali ah kuwaa oo u gacan galay Qowmiyada Oromada, sida uu hadalka u dhigay mana sheegin sifaha ay ku soo badbaadiyeen.
Waxa uu Cabdi maxamuud Cumar (Cabdi Iley), sheegay in dadkaasi aadka u farahabadan laga soo badbaadiyay Magaalada Hawaday oo ay degnaayen, kadib dilka 42 ruux oo Somali ah.
Waxa uu Cabdi maxamuud Cumar badbaadinta 300 ruux ka sheegay inta lagu guda jiray aas wadareed loo sameynaayay 28 ruux oo ka mid ahaa dadkii Soomaalida ahaa ee lagu gumaaday Magaalada Hawaday ee dalka Ethiopia.
”Ciidamadu kama aysan aamusin dhibta lagu hayo Soomaalida waxaan ku howlanahay badbaadinta Soomaali kale oo hadda ku sugan Magaalada Hawaday”
Haddalka Cabdi Cumar ayaa imaanaya iyadoo Qowmiyada Oromada dalka Ethiopia ay ku goodiyeen inay dilayaan qof waliba oo Soomaali ah ee ku dhaqan deegaanadooda.
Hadalka Cabdi Iley oo uu muuqda mid uu Oromadda ku baryootamayoo waayo dhigiisa maamulka Oromiya wuxuu wali ku hanjabaayaa in ciidan Cabdi ee Liyu Booliku yihiin kuwaa xasuuqay boqolaal Oroma ah looga aar gudi doono ficila maamulka ina Iley.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/07/thumb.jpg 210 210 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-09-16 09:50:542017-09-16 09:50:54Cabdi Iley oo Xabaalo Qod iyo Meyd Tira koob ka dhamaan la,
TV-ga ku Hadla Afka oromadda ayaa Wareysa Meela badan taaban la Yeesha Dr Zakariye... VIDEO: Maroodi Jid gooyo u Dhigtay Gaadhi Raran Oo Fal Xaasidnimo Ah Ku Sam...